Maamulka degmada Kaxda oo sheegay in ay meel wanaagsan marayaan hawlaha afurinta Danyarta | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka degmada Kaxda oo sheegay in ay meel wanaagsan marayaan hawlaha...
Maamulka degmada Kaxda oo sheegay in ay meel wanaagsan marayaan hawlaha afurinta Danyarta
Maamulka degmada kaxda ee gobalka banaadir aya faahfaahiyey howlaha lagu afurinayo dadka danyarta ee ku dhaqan degmadda xilli lagu gudo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Gudoomiyaha degmada Kaxda ee Maamulka Gobolka Banaadir Max’ed Ismaaciil oo la Hadley warbaahinta ayaa Sheegey iney Meel wanaagsan Marayaan howlaha lagu afurinayo dadka danyarta ee ku dhaqan degmada isagoo sheeegey ineysan ku filneyn deeqaha soo gaarey degmada iyo baahiyaha dadka ay qabaaa.
Max’ed Ismaaciil ayaa sheegey in hada deeqahan ay ka faaideysteen dad badan oo danyar oo ku dhaqan degmada isagoona u mahadceliyey dhamaan hay’adaha iyo shaqsiyaadka arimahaasi Dadka danyarta ah ka caawiyey.
Dhankale gudoomiyaha degamada kaxda Max’ed ismaaciil ayaa sheegey intii la guda galey Bisha Ramadaan ay ka socdaan degamada barnaamijka isxilqaan ee uu madaxweynaha Iclaamiyey laguna dhisayo xarumaha danta guud isagoona sheegey in arintaa ay ku dhisayaan hada ilaa iyo 7wado oo degmada gudaheeda ah iyo goobaha kale ee danta guud.
Ugu dambeyn maamulka degmada kaxda ayaa ugu baaqey dhammaan qeybaha bulshada iyo jaaliyada kasoo jeeda degmada iney kaalintooda ay ka qaataan waxkasta oo horumarin iyo amni ee degmada ku saabsan isagoona sheegey in Shacabka muhiimada ay siyaan sidii canshuurta ay u bixin lahaayeen.
Previous articleKaxda oo tiigsatay Heerka Labaad ee tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka
Next articleMaamulka G/Shabeellada Hoose oo bilaabay dib u dhiska Deegaanadda Sabiid iyo Caanoole